Gbasara Anyị | Shijiazhuang Huikang Food Co., Ltd.
Shijiazhuang Huikang food Co., Ltd. e guzobere na 1993, na edebanyere isi obodo 10 nde RMB. Ọ bụ nnukwu ọrụ nhazi nri ma bụrụkwa njikọ nke mmepụta, nhazi na azụmaahịa.
Huikang ụlọ ọrụ nri dị na mpaghara Zhengding, mpaghara Heibei, nke dị nso na ọdụ ụgbọ elu Shijiazhuang, nke dị nso na Beijing-Shenzhen Expressway, na 240Km gaa Beijing, 350km site na Tianjin Port. E nwere ebe kachasị mma maka ọdịdị ala na okporo ụzọ dị mfe.
Companylọ ọrụ ahụ na-ekpuchi mpaghara nke 45000㎡, nwere otu ụlọ ọrụ na-esi nri esiri esi nri, yana mpaghara 2800 ㎡, na-emepụta tọn 10 nke ngwaahịa esi nri kwa ụbọchị; Otu omumuihe zuru oke maka ịhazi mkpụrụ osisi inine na nri ọka wheat na mpaghara 1800㎡, nwere ike mepụta tọn 18 nke ụbọchị; Otu nyocha na mmepe ogbako maka ngwaahịa ọhụrụ, nke nwere otu ụlọ ọrụ nyocha zuru ezu; Atọ dị ala, nwere ike ịchekwa ngwaahịa 3500; Otu microorganism na nke anụ ahụ / kemịkal Laboratory, nke nwere ngwa na ngwa nyocha; Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ ahụ nwekwara ogige ngosi maka ịkọ mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri.
Companylọ ọrụ ahụ nwere ike ịmepụta ngwaahịa ọka wheat (dị ka dumplings, wonton, doubao, wdg) na mkpụrụ osisi na ngwaahịa (dị ka eyịm, poteto, carrots, kiwi mkpụrụ, strawberry, wdg) tọn 3500 kwa afọ, ma nwee ike ịmepụta ekpomeekpo oyi ngwaahịa anụ, sie nri 4000 tọn kwa afọ. Ngwaahịa ndị a na-agbakọ na Japan, America, Australia, Hongkong na obodo na mpaghara ndị ọzọ. Na ire nke ngwaahịa ndị a na-ewe òkè buru ibu na ahịa ụlọ.
Shijiazhuang Huikang nri co., Ltd. enwetara ikikere maka anụ esiri ekpo ọkụ na ngwaahịa ya nke sitere na anụmanụ nwere ụkwụ nwere mkpịsị ụkwụ nke Mịnịsta nke Ugbo, Foresty na Fisheries nke japan kwuru na 2001; enwetarala asambodo ISO9001 na 2002 na akwụkwọ HACCP kemgbe 2003. companylọ ọrụ anyị eguzobela Usoro Mmepụta Ezigbo na Usoro Ọrụ Nsacha, ma mezie ngwaahịa dị ka ihe chọrọ Hazard Analysis Critical Control Point, guzobere nyocha nchekwa zuru oke yana nlekọta na nlekọta usoro. , iji mesie ya obi ike na ngwaahịa ndị a ga-ezute ogo ogo nke ịbupụ nri.
Anyị ụlọ ọrụ bụ onye mmeri na mpi nke ụlọ ọrụ a, na-enye ahịa na elu-edu na mma ngwaahịa, Enọ na ezi aha, na-aghọ ndị ldading ekspootu na China. Ndị ụlọ na ndị ahịa na-amasị gị.
Shijiazhuang Huikang Food Co., Ltd. mgbe niile na-eso azụmahịa na nkà ihe ọmụma nke "Quality bụ isi nke enterprise mmepe; iguzosi ike n'ezi bụ na-akwọ ụgbọala ike nke enterprise development. Anyị ji obi anyị niile na-anabata ọrụ niile iji sonyere anyị ma mepụta ọmarịcha ọdịnihu.